အရောင်းအဝယ်သမားများ ၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်
ပါတနာပေါင်း ၃၁၅ ၀၀၀ ကျော်
အပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၀၀ လစဉ်ဆုကြေး
အပေါင်း ဒေါ်လာ ၅၀၀
လစဉ်မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရန် ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ပြီး သင်၏အကျိုးတူလုပ်ငန်းကော်မရှင်တွင် အပိုဒေါ်လာ ၅၀၀ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။
ရုရှား ဘောလုံးပွဲ ခရီးစဉ်ဆုကို ရယူလိုက်ပါ
Bonus + ဒေါ်လာ ၅၀၀
Perfect Money + ၅ ရာခိုင်နှုန်း အတွက် Bonus
FBS ဘောလုံးပွဲ ခရီးစဉ် ၂
မိုက်ခရို အကောင့် ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် ပုံမှန်(စံ) အကောင့် သုည spread အကောင့် အကန့်အသတ်မရှိ အကောင့် ECN
Forex Metals CFD CryptoCurrency
သမာရိုးကျ spread ဝယ်ဈေးနှင့် ရောင်းဈေး အကွာအဟ
lot အရွယ်အစား 100000 AUD
150.12 -5.57 1
372.42 -7.56 1
130.81 -6.72 1
16-5.13 -2.66 1
0.6 0.8 0.26 -3.56 1
lot အရွယ်အစား 100000 CAD
1.8 2.3 0.54 -5.52 1
14-1.19 -4.54 1
lot အရွယ်အစား 100000 CHF
17-5.8 -1.77 1
lot အရွယ်အစား 100000 CNH
20 24 -13.36 -3.42 1
lot အရွယ်အစား 100000 EUR
7 11 -13.11 3.65 1
16-8.8 -0.1 1
37-1.98 -4.27 1
15 20 -8.19 -1.63 1
1 1.5 -2.81 -2.21 1
13-4.8 -2.91 1
17-15.68 5.6 1
45 55 -15.6 1.4 1
0.5 0.9 -6.69 0.24 1
lot အရွယ်အစား 100000 GBP
15-16.12 5.68 1
17-11.08 1.2 1
37-1.43 -5.96 1
14-6.12 -2.97 1
56-20.17 8.93 1
0.7 0.9 -8.44 0.96 1
lot အရွယ်အစား 100000 NZD
150.72 -6.76 1
3 3.4 4.06 -7.94 1
18 22 1.65 -7.31 1
140.32 -5.03 1
lot အရွယ်အစား 100000 USD
13-3.65 -4.27 1
371.33 -6.97 1
10 15 -8.63 -1.63 1
12-1.11 -6.01 1
5 10 -22.7 10.5 1
1000 1000 -327.19 -106.81 300
5 10 -13 0.7 1
ငွေကြေး: အကောင့်အမျိုးအစား: Standard, အုပ်စု: Forex
အကောင့်အမျိုးအစား: Standard, အုပ်စု: Forex
*ဆင့်အကောင့် (cent အကောင့်)နှင့် စံအကောင့်(standard အကောင့်)တို့၏ဈေးနှုန်းအခြေအနေပြဇယား( chart)သည် ပြင်ပဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် 0.1 pipစာကွာဟနေပါသည်. ထိုသို့ကွာဟရသည်မှာ MetaTrader4 အက်ပလီကေးရှင်း၏ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါသည်.
**ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြရာတွင် အများအားဖြင့် ဂဏန်းလေးလုံး(4-digit quotes)ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်. ဒသမနောက်တွင် ဂဏန်းလေးလုံးရှိပါက(5-digit quotes)ဟုခေါ်ပြီး၊ ဒသမနောက်တွင် ဂဏန်းနှစ်လုံးရှိပါက (3-digit quotes)ဟုခေါ်ပါသည်. ဥပမာ, EURUSDဈေးနှုန်းတန်ဖိုးကို 1.36125 ၊ USDJPYဈေးနှုန်းတန်ဖိုးကို 101.852.
တရားဝင်: ဤ၀က်ဆိုဒ်ကို FBSမှဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်.
FBSဆိုသည်မှာ ထရိတ်ဒင်းဝန်ဆောင်မှုအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြစ်သည် FBS Markets Inc (မှတ်ပုံတင်အမှတ်119717), Parallax Incorporated (VC0100), Tradestone Limited (353534).
လုပ်ငန်းလိုင်စင် IFSC; Licence IFSC/60/230/TS/17, No.1 Orchid Garden Street, Belmopan, Belize, C.A.
Cysec (Cyprus Securities and Exchange Commission), Licence Number: 331/17.
FBS MARKETS INC သည်Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines,
VC0100တွင်တည်ထောင်ထားပြီး မြန်မာ, ဘရာဇီး, ထိုင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများအား ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမပေးပါ
ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအသိပေးချက် အရောင်းအဝယ်မစတင်ခင် ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့်မာဂျင်းဖြင့်အရာင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ဆုံးရှုံးမှုများရှိလာနိုင်သည်ကို သင်လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ထားရန်လိုပါသည်။ ပြီးနောက် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဆင့်မည်မျှရှိသည်ကိုလည်း သိထားရန်လိုပါသည်။
ဤ၀က်ဆိုဒ် မှ အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများ၊ ဓာတ်ပုံများအစရှိသည်တို့ကို အင်တာနက်နှင့် အခြားကိစ္စများတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖြင်း၊ ကူးယူဖော်ပြခြင်း၊ ပုံတူပွားခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်လိုပါက. ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်.